ပဲခူးဆား ဥက္ကဌကြီး ရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ မူကို တိုက်မယ့် အမေရိကန် - Zet Star
ပဲခူးဆား ဥက္ကဌကြီး ရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ မူကို တိုက်မယ့် အမေရိကန်
September 11, 2020 September 11, 2020 ZCC News	0 Comments
တရုတ်ရဲ့ တကယ့်သမ္မတ မဟုတ်တဲ့ ရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ မူကို တိုက်မယ့် အမေရိကန်
သြဂုတ်လ ရက်နေ့က ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား အမတ်( ရီပါဗလီကန်) က ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုတင်တယ် “Name the Enemy Act” လို့ခေါ်တယ် ရှီကျင့်ဖင်ဟာ ရာထူးစတင်ရကတည်းက နေရာအားလုံးကိုယူထားတယ် တရုပ်သမ္မတဟာ နိုင်ငံခေါင်းဆာင်ဖြစ်တယ် ပါီတီခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ် စစ်တပ်အကြီးအကဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ ထုံးစံဖြစ်တယ်
ဒါပေမယ့် အာဏာရှိတဲ့ ဆူပါကော်မတီတွေအားလုံးမှာ ရှီကျင့်ဖင်ဟာ ခေါင်းဆောင်ဝင်လုပ်နေတာမို့ သူ့မှာ နာမည်ပြောင် nickname ​​တွေအများကြီးရလာတယ် အဲ့သည်အထဲက ” Chairman of Everything ” ဆိုတဲ့နာမည်ကို အတော်လေးနောက်ပြောင်လာကြပါတယ် “ပါလေရာဥက္ကဌ” လို့ဆိုလိုပါတယ်
ဥပဒေကြမ်းတင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ဝေတဲ့ သတင်းဌာနတွေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ ရှီကို နာမည်ရှေ့ကနေ ရာထူးတပ်ရာမှာ သမ္မတလို့ မဖော်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် ရှီကျင့်ဖင်ဟာ သမ္မတဆိုတာထက် သက်ဦးဆံပိုင် ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုနေကြပါတယ် တရုပ်ပြည် တံခါးစဖွင့်တဲ့အချိန်ကတည်းက နိုင်ငံခေါ်င်းဆောင်တွေဟာ သူတို့မှာ အင်္ဂလိပ်လို ရာထူးအခေါ်အဝေါ်တွေရှိကြပေမယ့် ရှီကျင့်ဖင်ရဲ့ အခေါ်အဝေါ်မှာ သမ္မတလို့ ဘာသာပြန်လို့ရတာရှာမတွေ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
ရှီဟာ တရုပ်လိုခေါ်တဲ့ ရာထူးသုံးခုရထားတယ် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ် (guojia zhuxi)လို့ခေါ်တဲ့ရာထူး သူသည် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဌ (zhongyang junwei zhuxi) သူသည်PLA ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သည် တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (zong shuji) သူသည် တရုပ်ပြည်ကို အုပ်ချုပ်သော တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံရေးပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်တဲ့
အဲ့သည် ရာထူးသုံးခုနဲ့လှည့်ပတ်ပြီး သုံးနေပါတယ် စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် စစ်ရာထူး နိုင်ငံရေးမှာလည်းနိုင်ငံရေး လှည့်ပြီးသုံးနေပါတယ် သူ့နိုင်ငံက သတင်းစာတွေမှာတော့ သမ္မတဆိုပြီး ရေးသားတာရှိတယ် ဒါပေမယ့် President ဆိုတဲ့ဝေါဟာရ မတွေ့ရဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်
ဒါ့ကြောင့် တရုပ်ခေါင်းဆောင်ကို သမ္မတလို့ မခေါ်ဖို့ အခြားနာမည်ခေါ်ဖို့ ဥပဒေကြမ်းကို တင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုတလောမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရ အရာရှိကြီးတွေဟာ တရုပ်ကို China လို့မခေါ်ဘဲ PRC လို့ ခေါ်နေကြပါတယ် ရှီကိုတော့ (general secretary) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလို့ ခေါ်နေပါတယ် အခေါ်အဝေါ်တွေဟာဘာလို့ပြောင်းသလဲ ? ဘာလို့ပြောင်းချင်သလဲ ?
အမေရိကန်တို့ဟာ စနစ်ကိုတိုက်နေပါတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ် စနစ်ကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ တရုပ်ပြည်သူတွေ ဘယ်စနစ်နဲ့ နေထိုင်နေရတယ်ဆိုတာကို နားယဥ်စေမယ့် အသုံးအနှုန်းကို သိသိသာသာပြောင်းလဲယူပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ ရှီကျင့်ဖင်ဟာ သက်ဦးဆံပိုင်အာဏာရှင်ဖြစ်နေတယ် သူ့ကိုသမ္မတလို့ ခေါ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး ဆိုတာကို ထင်ဟပ်ပြလိုက်ခြင်းအားဖြင့် တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီထဲမှာ အသံတိတ်မကျေနပ်မှုတွေစတင်လာစေမယ်ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါရဲ့ ဒီလူအကုန်လုံးကို အုပ်စီးထားတော့တာပါလား ဆိုပြီးတွေးလာစေပါလိမ့်မယ် ငါတို့ဟာ သက်ဦးဆံပိုင်ခေတ်ကိုပြန်ရောက်နေပါပေါ့လားလို့ တွေးမိလာစေပါမယ် ပါတီထဲမှာ နဂိုရ်ကရှိပြီးသား ကြိတ်ပုန်းခုတ်တာမျိုးတွေ မကျေနပ်မှုတွေကို မြန်မြန်စလာစေဖို့ သပ်တစ်ချောင်းဖြစ်လာပါ လိမ့်မယ်
အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုအတွက် ဥပဒေကြမ်းတစ်ခု အလကားလုပ်နေပြီး ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဖြုန်းတီးနေတယ် ထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ် ရှီကျင့်ဖင်ကို ဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲ ?
← ရန်ကုန်ရှိ စျေးများ လုံးဝ မပိတ်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုး ပြောကြား
မြူးဇစ်ဇုန် ကေတီဗီသည် ဦးသန်းရွှေမြေး ဖိုးလပြည့် အပိုင်မဟုတ်ဟု ဖခင်ဖြစ်သူ ပြောကြား →